Kubata kunoita senge musoro wakakura pakutanga.
Kugoverwa kwekugovana, yakatsaurwa yekutambira, VPS, yakachengetedzwa kutambira, server cores, dzakasiyana RAM, CDNs, SSL zvitupa. Hazviperi.
Isu takakwanisa mazana emawebhusaiti pachedu pamusoro pemabasa edu.
Yakakura, diki, uye zvese zviri pakati.
Tichishandisa ruzivo rwedu rwekutanga-ruoko, takafamba munzira dzese dzekutambira uye takamanikidza pasi kune iwo akanakisa webhu saiti.
Isu takaputsa nzira dzakanakisisa dzekushandisa, nguva yekushandisa yega yega, uye nzira yedu yekutora yakanakisa webhu saiti.
Iwo e9Pamusoro Webhu Inotambira Vanopa
# 1 - Bluehost
Kazhinji $ 7.99 / mwedzi
Yemahara domain uye SSL chitupa
30-zuva mari yekudzoka
Tora 63% kutora
Kune varidzi vemabhizinesi uye masosi maneja, Bluehost inowanzofungidzirwa seyakasarudzika sarudzo yekubata webhu. Vakatenderedza nguva yakareba, vachipa kwakakura kutambira pamutengo mukuru, uye vane mukurumbira wakakura wekutsigira vatengi vavo.
Vane zvakare nekugamuchira iyo inotsigira chero kutungamira kwebhizinesi rako kukura.
Ngatiti iwe utange neyakajairwa kugoverwa kuronga chirongwa uye unoda kuisa WordPress. Ivo vane nyore-1-bhatani kuisa kuti izvozvo zviitike. Zvino kana webhusaiti yako ichiramba ichikura uye iwe uchida kukwidziridza yakachengetedzwa WordPress kutambira kuti ikurumidze yako saiti nekuvandudza kuchengetedza, ivo vanayo zvakare. Kana kana iwe uchida kuwana hwakawanda kudzora nekusimudzira kuVPS kana yakazvitsaurira kutambira, ivo vane zvirongwa zvese.
Iyo poindi ndeyekuti Bluehost inovhara zvese zvaungagone kuda kubva kune wekutambira. Kana iwe ukatanga navo, iwe hauzombofaniri kuchinja kune mumwe munhu.
Uye kana iwe ukakanda kana uine dambudziko, ivo vane 24/7 rutsigiro parunhare kana rarama chat. Hapana hoops dzekusvetuka kuburikidza neipi, ivo vanoisa yavo nhamba yekutsigira iko pane yavo peji yekuita kuti zvive nyore sezvinobvira:
# 2 - SiteGound
Kazhinji $ 11.95 / mwedzi
Yemahara SSL, email, CDN, & backups
Tora 67% kutora
Zvakanakisisa Kune: Vatengi Service uye Cloud Clouding
SiteGround ine imwe yeakanakisisa mukurumbira pakati pevashandisi vewebhu neanomarara fan base uye kupenya kuongorora.
Pamwe chete neHotoHost uye Bluehost, SiteGound ndiyo imwe yevatatu yeWebhu inokurudzirwa yeWebhu. WordPress kutambira yakavakirwa mukati mayo ese akagovana mapurani ekubata, iwe uchawana otomatiki shanduro, yakagadziriswa kuchengetedzwa, uye nyanzvi yehunyanzvi hwekutsigira.
SiteGround inonyanya kufungwa semutungamiriri mukugovana pamwe. Iwo maseva ayo ari Ultra anokurumidza uye akawedzera akachengetedzeka, uye SiteGound iri kungogara ichitumira matsva matsva ekuvachengeta nenzira iyoyo.
Kunyange zvirongwa zvayo zvese zvekugovana zvakagovaniswa zvine simba, SiteGound inonyanya kuzivikanwa neayo yepamusoro-sosi chirongwa chakagoverwa, GoGeek, iyo inotungamirwa nevashandisi vezvishandiso vanozowana zvakanyanya kubatsira, kusanganisira iyo stiring server uye Git repo kusikwa. Mazhinji emabhizinesi madiki uye ega mawebhusaiti achaona izvi zvichinyanya kuuraya, asi kana zvido zvako zvakawoma kupfuura zvigadziko, SiteGround ine zvakawanda zvekuda.
Kune imwe yakadzika. Paunenge uchinge wadurura kuburikidza neyeSayithiGround yekusvitsa mitengo, mutengo wako wechirongwa unowedzera katatu. Semuenzaniso, iro rayo repasi pasi rekugovana rakabatana rinosvetuka kubva pamadhora mana / mwedzi kusvika pamadhora gumi nemashanu uye sosi yaro yepamusoro inosvetuka kubva pamadhora gumi nemaviri / mwedzi kusvika $ 4. Izvo hazvinzwi zvakanaka. Muchokwadi, icho chaive chikonzero cheyakawanda yekuongorora nyeredzi-imwe paTrustPilot. Tarisa izvi kana iwe uchienzanisa mitengo uye uye yeuka kuti yako gadziriro yekuronga ichagara nguva yakareba zvikuru kupfuura yekusimudzira nguva.
SaitiGround zvakare ine pfupi ipfupi yekuyedza nguva yevamwe vese vedu vakagovana vatambi vedu vepamusoro kunotora: mazuva makumi matatu chete. Iri harisi dambudziko rakakura hazvo. Iwe unozogona kuongorora zviri nyore chero muenzi mukati memwedzi.
SiteGround ine makore inomiririra uye yakatsaurwa maseva. Muchokwadi, SiteGround ndeimwe yepamusoro yedu yekutora kwegore kugamuchira. Kana iwe uchifunga kuti pane mukana wekuti iwe unofanirwa kusimudzira kune imwe yakakomba yekubatira simba kamwe iwe unogadzira akawanda traffic, SiteGround ndiyo sarudzo huru ichaita kuti kukwidziridzwa kuve nyore gare gare.
Tsigiro yevatengi veSiteGround inowanikwa 24/7 pane ese chiteshi - runhare, kutaurirana, uye email - uye ruzivo rwayo ipfuma uye yakarongeka.
SaitiGround zvakare ine iyo yakawanda pachena nguva yekukwira: ine 99.9% pagore kumusoro nguva yekusimbisa (kana iwe unowana mwedzi wekutambira mahara) uye zvinotumirwa zviri zviviri pakati pegore uye neyakatanga mwedzi yekutanga iko panzvimbo yayo.
SaitiGround's yegore yepamusoro nguva zvichienzaniswa nemwedzi wapfuura.
SiteGround iri sarudzo inoshamisa kune mabhizinesi ane nzvimbo yekukura. Pane zvakawanda zvekusimudzira ekutsigira iwe munzira.
Ingotarisa uone kuti kukwidziridzwa kwemitengo kunoenda kupi pakuvandudzwa kwako kwekutanga.
# 3 - Hostgator
Kazhinji $ 6.95 / mwedzi
Mwedzi-kusvika-mwedzi ku $ 10.95
45-zuva mari yekudzoka
Tora 60% kutora
Zvakanakisisa zve: Scalability yeMutengo
Rimwe zita hombe mune diki bhizinesi webhu kutambira, uye zvishoma zvehomwe yakasanganiswa. Ndichiri HostGator ine yakakura yekuzvisarudzira yega ruzivo ndeyekuti, haina kupa chero mhando yeemail kutsigira - ingori foni uye yekurarama kutaura. Gadzirira kusvika parunhare chero nguva iwe uine mubvunzo. Kusiyana neDotahost, Hostgator inosanganisira kutsigira mune zvese zvirongwa. Kana iwe uchida chirongwa chekutambira chakachipa uye chinosanganisira kutambira, uyu ndiye muvaki wako.
HostGator inoda kukwikwidza zvakanyanya pa tech tech sePMMag, asi kuongorora kwevatengi kwakanaka kunotyisa: inongova nenyeredzi imwechete paTrippilot. Kana iwe uchifarira kuyedza HostGator, ini ndinokurudzira kutora mukana wakazara wemazuva-makumi mana ekudzoserwa mari yekudzoserwa uye kuyedza kutsigira kwavo zvakakwana usati waita.
HostGator inopa Windows kuitisa mukuwedzera kuLinux, pamwe nemhando dzakasiyana dzesarudzo dzekuvandudza, kusanganisira gore rekutora, kuitisa VPS, rakachengetedzwa WordPress, uye server yakatsaurirwa. Yakagovaniswa kuronga zvirongwa zvinotanga pa $ 2.75 / mwedzi.
Kana iwe uchitsvaga iyo inodhura host, iwe unofanirwa kutanga nekuedza Dreamhost kutanga. Wobva waedza Hostgator sekufananidza uye sarudza iyo yaunonyanya kufara nayo.
Asi chete funga HostGator kana iwe uchida kuchengetedza yako yekutambira bhodhi yakaderera sezvinobvira.
# 4 - Hostinger
Enda kune Hostinger
Tora 90% kutora
Zvakanakisisa zve: Zvirongwa zveKubhadhara Zvakachipa
Kana iwe uri kutarisa kuti uchengetedze mutengo wekutambira zvakaderera sezvazvinogona, funga zvakakomba Hostinger.
Kuronga kwavo kwakaderera kunotanga pane isingasviki dhora:
Yese mitengo iyi kukwidziridzwa saka vanokwira kumusoro patsva. Asi iwe unokwanisa kuvhara mumitengo iyi anoseka pane kunyorera kureba. Iwe unogona kunyatso kusaina kwemakore maviri ekutambira kwe $ 1 / mwedzi kana iwe ukabhadhara iyo makore maviri kumusoro kumberi. Icho chishamiso chinoshamisa.
Kunyangwe mushure mekukwidziridzika kwemitengo yapera, mitengo yacho ichiri yakaderera. Iyo yega saiti chirongwa inongoda $ 2.15 / mwedzi, imwe yakaderera mitengo muindasitiri.
Chikamu chakanakisa? Hostinger hainzwe kunge yakachipa yekutambira. Ehe, ivo vane mamwe manesi anoedza kukunyengerera iwe kuti uve mutengi seye ekunyepera kuverenga nguva. Asi ivo vakanaka munyoro vachienzaniswa nemakambani anotyisa ekutamba seGoDaddy. Kubva pane kushambadzira kune UI yekugadzirisa yako saiti, inonzwa seyamu yekutanga.
Iyo nguva yepamusoro, nzvimbo yekumhanyisa, uye kutsigirwa zvese zvakanaka. Ivo vane 99.9% uptime garandi pamwe ne 24/7 tsigiro chero paunoda rubatsiro. Usatarisira kuti ivo vave vakanaka sevamwe magedhi asi kukosha kwedhora hakufanire.
# 5 - WP Injini
Shanyira WP Engine
Kazhinji $ 35 / mwedzi
Mwedzi mina mahara kana makumi maviri kubva
Yakanakisisa Kune: Yakatungamirirwa WordPress Hosting
Kana vanhu vazhinji vachifunga nezve yakagadziriswa WordPress hosting, ivo vanofunga WP Engine. Uye nechikonzero chakanaka - inopa chigadzirwa chakanakisa. Izvo zvinouya nemutengo zvakadaro. Iyo inomiririrwa zvizere neWordPress mwenyeji inodhura zvakanyanya kupfuura yakagoverwa varidzi vekugamuchira. WP Injini yakaderera-yemitengo yakaderera madhora makumi matatu nemashanu / mwedzi, uye ndiyo chete yepaiti 35GB saiti ine max 10 vashanyi / mwedzi.
Asi iwe paunotarisa mune izvo WP Injini inoitira iyo mutengo, iyo inoshamisira inonakidza nzira yekuda varidzi vewebsite saiti. Seye inorindwa neWordPress host, WP Injini inongopa sevhisi kune vashandisi veWordPress, zvinoreva kuti zvese zvirongwa zvaro zvinogoneseswa kuti zvive neWordPress. Iwewe saiti uchave wakaipa nekukurumidza, hapana kana downtime, uye yakawanda yekugadzirisa mabasa anotarisirwa pachako. Kana iwe uchida nzvimbo inopisa inononoka nzvimbo apo zvese zvinotarisirwa nekuzvitakura, iwe uchada WP Injini.
Tsigiro yevatengi zvakare laser-yakatarisana neWordPress, iyo inoita kuti vakwanise kwazvo ruzivo ruzivo rwekutsigira vashandi vanowanikwa kuburikidza vakateedzerwa matikiti uye pane yekurarama kutaura 24/7.
Ingo yeuka nezve mutengo. Iwe unenge uchibhadhara yakawanda kuti uwane yakawanda. Nezvakataurwa, WP Injini, ndiyo yekupedzisira sarudzo kune chero bhizinesi riri kumhanyisa paWordPress. Kana iwe usiri kuda kutambisa nguva kugadzirisa iyo inotambira chikamu chewebsite yako, saka aya ndiwo majaya ekutendeukira kwaari.
# 6 - Dreamhost
Kazhinji $ 2.59 / mwedzi
Mwedzi-kusvika-mwedzi mitengo pamadhora mazana mana nemakumi mana nemashanu
4.6 / 5 rating kubva kuTrippilot
Zvakanakisa zvekubhadhara kwemwedzi
Yakanyanya Yakachipa Zvirongwa zveMwedzi
DreamHost inozivikanwa pakuita zvinhu nenzira yayo. Izvo hazvishandise chiyero canel iyo yakawanda anoshandisa. Iyo yakavaka zvakakwana tsika inodzora panel yauchazoshandisa kutonga rako webhusaiti. Vazhinji veDoorhosta vanoida asi zvinogona kuita kuti zvinhu zviome zvakanyanya kana iwe ungazoda kutama uchibva paDotahost. Ini handingaronge nezvekutama muDotahost kuve nyore futi. Saka isarudzo yakanakisa yemhando mitsva nzvimbo.
Kuwedzera kune yakagoverwa yekugamuchira uye yakachengetedzwa WordPress kutambira, DreamHost inopa kukwidziridzwa kuVPS uye gore rekutambira, pamwe nemaseva akazvitsaurira iwe ungazombovada.
Izvo zvinonyanya kukosha kutarisa ndeye yakanakisa inopihwa DreamHost ine yezvisingabatsiri: imwe yemahara Yakagovaniswa yakagoverwa yekuronga kuronga (iyo inosanganisira chengetedzo isingaverengeki, bandwidth isina kuganhurika, nzvimbo dzisina kuyerwa, uye email yekutambira) kwemakumi mashanu (c) (501) masangano pane yepamusoro-soro DreamPress yakakwanisa WordPress yekubata. Icho chibvumirano chinonakidza.
DreamHost imwe yeimwe yeWordPress nhatu dzakakurudzirwa mabhesi, uye inosanganisira mamwe akagoneswa WordPress kutambira mumaronga ayo ekutanga akagovaniswa. Inopawo hurongwa hwakarindwa nemabhero akawanda uye murungu anonzi DreamPress. Zvirongwa zveMwedzi pasi pemadhora matatu / mwedzi zvinowanikwa kana iwe uchibhadhara gore rega, $ 3 / mwedzi kana uchida kuwedzera email. Iyo ine iyo indasitiri inotungamira yemahara nguva yekuyedza - yakakwana-yemazuva-mazana-yekudzoserwa mari-yekudzoserwa - uye pachena mitengo yemitengo isingawedzera mushure mako chibvumirano chekutanga.
Kubata vatengi hakusi kushoma mutsika: email rutsigiro runowanikwa 24/7, asi runyararo rwekutaura runongovapo panguva dzebhizimusi maawa, uye chaizvo unofanirwa kubhadhara $ 9.95 kuti uwane rutsigiro rwehunyanzvi pamusoro pefoni. DreamHost inodaidza izvi "zita remadunhurirwa" - ndinodaidza izvi zvinogumbura. Kana iwe uchizoda rutsigiro rwakawanda paunenge uchimisa saiti yako, ini ndinotora mumwe wakasiyana.
Izvo zvakati, iyo yemahara nguva yekuedzwa ndiyo refu pane bhizinesi - mazuva makumi masere nemasere. Akagovana zvirongwa zvekutambira zvinotanga pamadhora mazana maviri nemakumi mapfumbamwe nemashanu, uye sezvo DreamHost isingaite promo yemitengo, haisi kuzosimuka mushure mekunge kontrakiti yako yekutanga yakwira. Iyi ndeimwe yemitengo yepasi yekutambira kunze uko, iri sarudzo hombe kune chero munhu anotarisa kuti achengetedze dhora rega.
# 7 - InMotion Kubata
Yemahara uye isina mwero email
90-zuva mari yekudzoka
Tora 50% kutora
Zvakanakisisa zve: VPS Inotakura
InMotion inogona kunge isingaoneke kupenga, asi yakasimba webhu ine hunyanzvi hwakanakisa, hwakawanda urongwa hwezvirongwa, uye mauto evenguva refu vatengi.
Yayo huru-yekuzvibatsira rubatsiro dheti ndiyo indasitiri yakajairwa, uye kutsigirwa kwevatengi kuri pakati pezvakanakisa. Hautendi here? Edza zvako. InMotion yemazuva makumi mapfumbamwe emazuva eedzo yekuyedzwa kwekugovana kwakagovana ndeimwe yehurefu hwakakomberedza uye inokupa iwe yakawanda nguva yekuyedza kunze InMotion's timu yekutsigira.
Zvirongwa zveMMMotion zvakatwasuka uye zvakada kufanana. Sezvaunosimudzira, iwe unowana nekukurumidza sevha uye humwe dhata, mawebhusaiti, uye subdomain. Iyo nzira yakatwasuka isu yatinoda, kunyanya kune mabhizinesi madiki uye mawebhusaiti asiri kunyanya kuomesa. Hapana anodzvinyirira anokwidza kana kuvhiringidza ma tiers ekunetseka nezve.
Kunyangwe zvirongwa zvekupinda zvine chikamu chakanakisa rutsigiro rwevatengi. Ndi 24/7 kuburikidza ne5 nzira dzekutaurirana: foni, chat, email, tutorials, uye Q&A, iyo yakapindurwa zvine simba. Iniwo ndinotenda kuti hapana rutsigiro urwu rwakavanzwa kana kuoma kuwana. Iyo nhamba yefoni inotepfenyurwa pamusoro peji uye iyo yekutsigira yekutsigira login iri nyore kuwana mune yako admin pani. Hapana chimwe chinhu chinogumbura kupfuura 24/7 rutsigiro runoda kuti iwe utange wafumura nzira dzekubata wega. Iko kutambisa nguva uye kunondiudza chaizvo zvandinofanira kuziva nezve iye ari kukoka.
Ini zvakare ndinoonga kuti rutsigiro rwuripo padanho rako - kungave uchingotanga uye uchida munhu kuti akufambe iwe kuburikidza nemahwindo ekupedzisira ane hunhu uye hunotsigira hunhu, kana kuti iwe unoda munhu anogona kutaura specs uye technical nuances senge pro, iyo InMotion rutsigiro iwe yaunofukidza.
InMotion's rutsigiro ndiyo inoita kuti iratidzike kubva kune vamwe mauto. Kana iwe uchitsvaga isiri-nonsense host ine inoshamisa kubatsira kwevatengi, InMotion ndiyo yako yakanakira sarudzo. Icho chatinofarira kutora mabhizinesi madiki nekuti uchave uchigona kuwana rubatsiro rwese rwaunoda.
InMotion inogara ichimhanyisa mitengo yepromo, nezvibvumirano zvinotanga zvakaderera se $ 5 / mwedzi. Zvakajairika mutengo wekugoverana mabumps anosvika $ 8- $ 9 / mwedzi mushure mekunge chibvumirano chekutanga chakwira.
Pamusoro pekugovana kwekugovana, InMotion inopa kukwidziridzwa kune yakachengetedzwa WordPress kutambira, VPS yekutambira, uye maseva akazvitsaurira.
# 8 - A2 Kubata
Enda kune A2 Hosting
Yakavimbika uye Yakakurumidza Kugovera Inotakura
A2 Hosting ine mukurumbira wekuve nekamwe kukurumidza kukurumidza kwewebhu kutenderera.
Pane yega yega yekutambira tier (yakagoverwa, VPS, yakatsaurirwa), A2 Yekutambira inorova mamwe mauto kumhanya. Saka kana iwe uchitsvaga yakachena mhanya, iyi ndiyo yako yakanaka yekutora.
A2 Hosting zvakare ine 99.9% Uptime Kuzvipira pane zvese zvirongwa saka iwe unoziva iwe uchave uine wakavimbika wekutambira uyo usazove pasi kazhinji.
Ini ndinonyatsofarira yavo yemahara saiti kutama inouya neyega yekutambira. Kana iwe waisa yako saiti kumusoro kune yakaipa mwenyeji uye uchida kutama, iyi inonakidza chibvumirano. Ichaponesa yako yakawanda maawa kuyedza kuti yako saiti ivakwezve. Rega iyo A2 Yekutambira timu iite nayo.
Kufanana nemamwe mazhinji emamwe mawebhusayithi, kune ma-1-click masoftware eese anozivikanwa eCMS zvishandiso seWordPress, Magento, uye Drupal.
Ramba uchifunga kuti yavo yakaderera tier, iyo Lite kuronga inongosanganisira 1 webhusaiti:
Kana iwe ukaronga nezvekugamuchira akawanda mawebhusaiti, iwe uchafanirwa kuwana iyo Swift chirongwa icho chiri chekuwedzera $ 2 / mwedzi mushure menguva yekukurudzira yapera.
Imwe tsikidzi yekuchengetedza mari ne A2 Hosting: mitengo yekusimudzira inopera pakuvandudza. Kuvhara mune iyo 63% kuderedzwa kwenguva yakareba sezvinobvira, enda kune yechitatu-gore kubhadhara iyo ichabhadhara kwemakore matatu kamwechete. Iwe uchawana 2 makore ekutambira mahara.
# 9 - GoDaddy
Kazhinji $ 8.99 / mwedzi
24/7/365 US yakatsigirwa rutsigiro
Yemahara domain uye 1 gore reemail
Yakavimbiswa 99.9% kumusoro
Tora 33% kutora
Akakurumbira Webhu Webhu
GoDaddy ndiyo inoshandira behemoth.
Chero iwe chaunofunga nezve brand yavo kana yaimbove CEO, ivo ndivo vanonyanya kufarirwa web host nekusvika. Izvi zvinonyanya kukonzerwa nekushambadzira kwavo, ivo vakaisa mari yakawanda mumakore apfuura mukuzivikanwa kwechigadzirwa. Kunze kwemakambani ese anotambira, iwo iwo ayo anenge munhu wese anoziva.
Saka vakanaka sei?
Ndingadai ndisina kuvadaidza iwo akanakisa web host asi avo akajairwa mapakeji emakwikwi ari kukwikwidza:
Mitengo uye maficha anofananidza zvakanaka kune mamwe ma web host. Iyo Deluxe chirongwa chinokuwanira iwe isina mawebhusaiti mawebhusaiti uye nekuchengetedza pamwe chete ne-1-kongedza masoftware akafanana neWordPress. Zvese zvemadhora gumi nemaviri / mwedzi mushure megore rekutanga.
Ive unonyatso kungwarira nechero chii chinosanganisira kukwidza kana mutengo wekusimudzira. Vane nhambo refu yekuchaja zvinhu zvisina basa kana kugovera zvidhoma zvihombe zvinouya zvakakomba pasi.
Tora chaipo .club vape chavainacho:
Pakutanga, izvi zvinonzwika sechairo rinoshamisa. Iwe haungawani gore rekutambira webhu pamadhora 0.99 chero kupi.
Asi pane rimwe dambudziko hombe nechinopihwa ichi. Iwe unenge wakanamirwa ne .club domain. Izvi zvakanaka kana iwe uine mudzidzi kana hobby webhusaiti. Zvebhizinesi kunyange, iwe haudi URL kune yakobusiness.club. Kwete chete kuti inoratidzika seisingabatsiri zvechokwadi, ichave neyakaomesesa nguva yekutsvaga mazwi muGoogle pane yakajairwa .com domain.
Uyezve, kana iwe uine webhusaiti risiri rebhizinesi, wadii kushandisa yakavakirwa saiti muvhi uye svetuka mubhadharo zvachose?
Icho chidzidzo ndechekungwarira izvo GoDaddy zvinopihwa. Yawo akajairwa kutambira mapaketi ese ari kukwikwidza, ingodzivisa chero upsell uye kukurudzira madhiri ayo avanawo.
Uye kana iwe uchingo kusaina kune yekugamuchira pakeji, iwe ucharohwa neakawanda ma upsell. Ndiwo maitiro avaiita kambani yakakura kudaro.
Muchiitiko iwe uri kushamisika, GoDaddy akabatanidzwa mune akati wandei kunyadzisa. Kudzoka muna 2011, CEO panguva iyoyo akapemberera kuuraya kwake nzou uye akatumira vhidhiyo pama media enhau. Iyo kambani yakatorawo kutsoropodza kwakawanda kumhanya nekushambadzira uye sxualized kushambadzira kwevakadzi. Sezviri pachena, CEO mutsva akaedza kugadzirisa tsika yaGoDaddy.
Kubata Kambani Side-by-Side Kuenzanisa
Isu takatevedzera iyo yakakosha data uye maitiro emakuru makumi mashanu ewebhu webing makambani. Mushure mekudzikisa iyo kusvika iyo yechipfumbamwe yepamusoro, iwe unogona kuona pano padhuze-ne-parutivi kuenzanisa.
$2.95 $3.95 $2.75 $2.15 $3.99 $5.99 $2.59 $2.96
50GB 10GB 100GB 10GB Unlimited 100GB 20GB Unlimited
Unlimited Unlimited Unlimited 100GB Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
Ehe Ehe Ehe Ehe Ehe Ehe Ehe Ehe
Ehe Aihwa Aihwa Aihwa Ehe Ehe Ehe Aihwa
Ehe Ehe Ehe Aihwa Ehe Aihwa Ehe Ehe
Aihwa Ehe Ehe Aihwa Ehe Aihwa Ehe Ehe
Ehe Ehe Ehe Ehe Ehe Ehe Aihwa Ehe
Aihwa Ehe Aihwa Aihwa Aihwa Aihwa Aihwa Ehe
Ehe Ehe Aihwa Aihwa Ehe Aihwa Ehe Ehe
Mahara Saiti Muvaki
99.9% 99.9% 99.9% 99.9% 99.9% 99.9% 100% 99.9%
30 Days 30 Days 45 Days 30 Days 90 Days N / A 97 Days 30 Days
Iyo Yakanyanya Kugoverwa Webhu Saiti
Kune ruzhinji rwevanhu, iwe uchada vakagovana webhu kutambira.
Kugoverwa kwewebhu kugovana zvinoreva kuti webhusaiti yako iri pane imwe sevha sedzimwe mawebhusayithi. Masaiti mazhinji madiki akakwana zvekuti haadi sevha yakazara kune iwo ega saka webhu masaiti anounganidza boka remasaiti pamwechete uye anovaisa vese pane imwe sevha.
Aya ndiwo mawaniro anoita webhu mutengo wekugamuchira pasi.
Muzviitiko zvakawanda, chinhu chikuru.
Iyo huru yakadzika pasi kune yakagoverwa yekugamuchira ndeyekuti imwe saiti inogona kutora yako saiti pasi nayo. Kana masosi akati wandei ari pane imwe sevha uye imwe yeaya masosi inowana yakakura traffic traffic iyo inotora server pasi, masosi ese anodzikira. Saka zvinokwanisika kuti saiti yako iende pasi pasina mhosva yako.
Mukuita, izvi hazviwanzo kuitika. Kunyanya kune madiki masosi anokwanisa kubata zvishoma nguva yega yega kamwechete panguva, kuve nekugovana kugashira ihurukutengeserana-kubhuroka kuti imba yekutambira igadzikiswe.
Funga nezve kugovana kwekugovana seyakakodzera "yekupinda-chikamu" cheji yako saiti.
Saka ndedzipi makambani ekubata ndiwo akanakisa ekugovana kwekugovana?
Aya ndiwo makambani mana akagoverwa anotambira:
Yakanakisa Cloud Hosting
Kana iwe uri kuvaka saiti yakakura kana uchida kuvimbisa yako nguva, iwe uchazoda kutsvaga cloud hosting.
Cloud yekubatira yakatosiyana zvishoma pane yakagovana yekugovana.
Panzvimbo peboka renzvimbo dzakasiyana uchishandisa sevha imwechete, yako saiti inozopararira pamaseva akawanda. Izvi zvine mashoma akakosha mabhenefiti:
Dzimwe nzvimbo dzinotadza kutora saiti yako pasi. Kana vakawana spike, server yako inogona kungotanga kushandisa mamwe maseva.
Iwe unogona kukurumidza kuyera yako webhendi bhendi kumusoro uye pasi. Sezvo iwe wave kutoshandisa akawanda maseva, zviri nyore chaizvo kuwedzera zvimwe kana kutora zvimwe.
Sezvo paine kudzikisira pamaseva akawanda, server uptime inowana nani.
Zvese zvakanaka izvi zvinouya nemutengo wepamusoro. Hazvina mhosva kuti ndeyipi iyo yaunosarudza gore
Ini ndinoshandisa iyo zviuru zvevashanyi kutonga. Kana saiti yangu ine pamusoro pevashanyi zviuru makumi mashanu pamwedzi kana ichida mune ramangwana rakajeka, ini ndinosimudzira kune gore rekugamuchira.
Funga nezve Cloud hosting kana iwe urikuronga kuvaka saiti yakakura kana uine bhizinesi risingakwanise chero kutenderera chero zvipi.
Aya ndiwo makambani matatu akanakisisa ekutora gore:
Iyo Yakanakisa Bhizinesi Diki Yekutambira
Chero chero muridzi webhizimusi diki ane yakawanda pane yavo ndiro. Kushambadzira, kutonga sevhisi kana kutumira zvigadzirwa, ese mabasa ekumashure-ehofisi, inowedzera kumusoro. Zviwanikwa zvakare zvakatemerwa saka kana chimwe chinhu chikatsemuka, muridzi anofanirwa kuzvigadzirisa pachavo. Uye pamusoro peizvozvo zvese, ivo vanofanirwa kutarisa madhora ese. Dhora rega rega rekuwedzera mune mutengo rinoreva dhora rimwe shoma muhomwe mavo.
Wakanakisa mawebhu ezvemabhizinesi madiki akavimbika, uve nerubatsiro rwepasi rose kana nyaya isinga tsanangurike ikauya, uye uine mutengo unonzwisisika. Izvi zvinoderedza mamwe mabasa emuridzi apo achichengetawo zvakaderera. Uye kana zvinhu zvikatadza, timu yakatsigira inoita kuti gadziridzo dzisarwadza sezvazvinogona.
Uri kutsvaga icho chinotapira nzvimbo pakati pemutengo, kuvimbika, uye chinoshamisa timu yekutsigira.
Aya ndiwo maviri akanakisa mabhizinesi madiki ewebhu anotambira anopfuura ese matatu:
Iyo Yakanakisa WordPress Hosting
Blogs ndeimwe yenzira dzandinofarira dzekuvaka traffic uye vatengi. Ini ndakagona akawanda masosi nemazana ezviuru kana mamirioni evashanyi pamwedzi.
Kana zvasvika kumablogi, WordPress ndiyo yakasarudzika sarudzo yekushandisa blog.
Mazuva ano, ini ndinogara ndichigadziriswa WordPress kuratidzira kune yangu yakakwira traffic mablog. Kutungamirirwa neShoko rePepanhau rekugamuchira ndeye yakasarudzika yekutakura paki yakavakwa zvachose kutenderedza WordPress.
Kune mashoma akakosha mabhenefiti ekuwana nyanzvi yeWebhusaiti yekugamuchira:
Zvese zvirimo zvakarongedzwa zvakatenderedza WordPress
Kuchengetedza kuri kuwedzera kwakasimba
Kugadziriswa kwe WordPress uye sevha yekugadzirisa inoitika pakarepo
Backups dzinoitika pakarepo
Chikwata chekutsigira chine ruzivo rwepamusoro rweWordPress
Iyo saiti inogona kubata yakawanda yakakwira traffic vhoriyamu sezvo zvese zvakavakirwa zvakatenderedza WordPress
Pane chikuru chakakomba pasi: mutengo.
Yakagadziriswa WordPress webhusaiti inowanzoita kunge inodhura. Kana iwe uri kuvaka saiti nechinangwa chekugadzira matani emota (zviuru zvezviuru vashanyi / mwedzi), zvakanyatso kukosha. Ini ndinoenda nenzira iyi kunyangwe ini ndisati ndagona kuwanda kwemota izvozvi. Chero bedzi ini ndakaisa chinangwa chekuvaka iyo traffic kupfuura nguva, ini ndinosarudza iyo yakachengetedzwa WordPress muvambi kubva pakutanga.
Ko nezvesaiti diki dzinoda kushandisa WordPress?
Muchiitiko ichocho, svetuka iyo yakachengetedzwa WordPress hosting. Iwo eprimmenti maficha haapi kukosha kwakaringana kururamisa iyo yekuwedzera mutengo. Ingangoita yega yega muenzi kunze uko anotendera iwe kuisa WordPress nyore uye nekukurumidza.
Etu 3 anodiwa WordPress makosi:
Iyo Yakanakisa Yakachipa Yekutapa
Dzimwe nguva, iwe unofanirwa kutambanudza dhora rega rega.
Chero mamiriro ezvinhu, kune nzira dzekuchengetedza pane ako ekutambira mabhiri. Uye sezvo ivo vachidzoka mwedzi wega wega, kuzviwana zvakaderera sezvazvinogona zvinowedzera pamusoro penguva.
Ndiri kuda kukupa yambiro nekukurumidza.
Pamawebhu anotambira, unogona kuenda ku TOO zvakachipa. Iko kune poindi uko kudzikisa mutengo kwakawedzera kukanganisa zvakanyanya kunaka kwekugamuchira kwako. Yako saiti ichave iri pasi nguva nenguva, hauzombogona kuwana inokwanisa tsigiro rep yekukubatsira iwe, uye basa rega raunoyedza kupedzisa richava neinotyisa mushandisi ruzivo.
Tawana zvakanakisa cheap web host. Kunyange hazvo sevhisi yavo isiri yakanakawo seye isu watinokurudzira, zvakanaka zvakakwana kana uri kuyedza kudzikisa mutengo. Ingo chenjera nezvekutenga uchitenderedza kune chero anodhura madhiri, zvinowanzove zvakanyanya kunaka kuti zvive zvechokwadi.
Isu tinokurudzira aya ma2 host kana iwe uchiedza kuwana mutengo wakaderera sezvinobvira:
Zvakanakawo kumapurojekiti emativi kana mazano auri kutamba nawo. Zvino kana ikava projekiti chaiyo kana bhizinesi, iwe unogona kugara uchichinjira kune rimwe remahosi ari nani gare gare.
Kushandisa iyo Ongororo: Sei Kuwana Iyo Yakanakisa Kuitisa Iwe
Usati waganhura mune zvese maitiro ekuongorora webhu, ini ndine mimwe mitemo iri nyore kwauri yekutora yako webhu inomiririra:
Kana iwe ukaronga kuvaka yakakura traffic WordPress blog, tora WP Engine. Iyo yekuwedzera mutengo inokodzera chaizvo. Ichi zvekare chakanakira sarudzo kune vanhu vanoda kubhadhara zvishoma zvakapetwa kuti varege kumbozeza kunetseka nezve chero chinhu chine chekuita nekutambira kwavo.
Kune mamwe maseseji, tora webhu inomhanyisa, ine nguva yakakwira, uye inoshamisa rutsigiro. Bluehost, Siteground uye InMotion mabheti ako akanaka pano.
Kana iwe uchinyatsoda kudzikisa mutengo pasi, ita pamwe Hostinger or Hostgator. Ose ari maviri akanaka pamitengo yakaderera. Ini handingatarise nezveavo maenzi ari chero akadhura pane izvi hazvo.
Nekutevera iyi mitemo, iwe uchave uchifarira neiye unogamuchira uye haufanire kuchinja chero nguva munguva pfupi.
Saka isu tinoita sei kuti tiongorore web host? Chii chinonyanya kukosha?
Ngatipfuurei nezvese zvakakosha zvinhu.
Kana vanhu vasingakwanise kuenda kune yako saiti, nei vanayo zvachose?
Kutanga uye pamberi pezvese, iwe unoda webhu inomiririra ine hukuru hukuru. Izvi zvinoreva kuti iwe saiti inogara iripo uye haifi yakadzika.
Kuedza kudzivirira iyo "kungovimba isu" vimbiso yepedyo-yakakwana nguva, mazhinji ma host anopa imwe mhando yevimbiso yeinenge 99.9 muzana kumusoro. Nekudaro, iyo vimbiso haisi yakawanda yevimbiso. Zvinongoreva kuti bhajeti rako rinogona kudzikiswa mune chero chiitiko chisina kugadziriswa. Pane akawanda kudhinda kwakanaka pane idzi vimbiso, zvakare, kusanganisira kusabvuma zvako-kuzivisa kana yechitatu-bato uptime dhata, uye kwete kupa kudzoserwa kwekudzora nguva yaive kunze kwekutonga kwemuenzi (semuenzaniso, dutu).
Speed ​​site inokanganisa zvese zvinoenderana newebsite yako. Unoda masosi ekutsvaga? Tora saiti inomhanyisa. Unoda kushandurwa pane yako saiti? Kurumidza. Unoda vashandisi vanofara? Kurumidza.
Chero chikamu chebhizinesi rako chinokanganiswa nekukurumidza kwewebsite yako.
Paunenge uchitarisa kune dzakasiyana webhu makosi, ita shuwa kuti urikusarudza muvhesi anogona kusheedzera mapeji ese ekunyepedzera kupatsanuka.
Pane imwe nuance ine nzvimbo yekumhanyisa.
Mumazuva ekutanga, iwe unoda mupi anokurumidza "zvakakwana". Izvo hazvifanirwe kunge zvichisangana nekukasira asi zvinoda kukurumidza. Funga nezveAmazon. Kudzoka muzuva iro Amazon ichangotengesa mabhuku, saiti yavo yaida kukurumidza asi zvaisada kuva nekukurumidza. Iye zvino vanhu vazhinji vanozvishandisa kutenga kwavo kwese kunotenga, saiti yeAmazon haigoni kukurumidza kukwana.
Iyo yakakura iwe yaunowana, inokurumidza iwe yaunoda kuve. Kana iwe uri kuronga nezvekuvaka yakakwira-traffic saiti, iwe uchada mushanyi uyo unogona kuchengetedza unopenga-nekukurumidza mhanyisa kumasiti makuru.
Paunenge uchimhanyisa yako webhusaiti, webhu inomiririra vatengi rutsigiro ndiyo yega inonyanya kukosha chinhu web host inogona kupa.
Kuchera kuburikidza nekushandiswa kwekushandisa hakurambi kuchikupa mhinduro yekusimbisa pane kunaka kwekutsigira pane imwe webhu inomiririra.
Panogona kuve nemusiyano pakati pekuongorora uye kunaka. Tora, semuenzaniso, HostGator. Tekinoroji dzeTekinoroji dzinowanzoisa zvigadzirwa zvadzo zvakanyanya: inowana mucherechedzo we4.5 kubva pane mashanu pane ese maviri CNET uye PCMag. Asi ine nyeredzi 1 nehafu Trustpilot uye chete ina nehafu nyeredzi pamusoro WhoIHostingIzvi - uye dzinenge zvese zvataurwa zvisina kunaka zvinotungamirirwa kubasa revatengi.
Chenjerera kuongororwa kupenya pane zvepamusoro zvinyorwa, hazviwanzo kuratidza chokwadi.
Pane imwechete yechokwadi bvunzo yekuongorora yevatengi rutsigiro rwemhando kune chero muenzi.
Muedzo wakasununguka wevatengi wekutsigira bvunzo.
Akanakira wega webhu saiti ane imwe mhando yemari-yekudzosera vimbiso pane avo vakagovana mapurani ekutambira, izvo zvinoreva kuti iwe unogona kumisa webhusaiti yako uye uone zvaunofunga nezvebasa riine mashoma akadzika - inguva yako uye chero mari yekuwedzera iwe sarudza mukati, sekubhadhara kunyoresa domain. Isu tinokurudzira kuenda kuguta nerutsigiro rwevatengi panguva iyoyo yekuyedza. Svika pane chat chat, vhura matikiti, hop pafoni zvakanyanya sezvinobvira kuti uone kana iwe uchida izvo zvauri kushumirwa.
Mazhinji mawebhu anotipa anopa imwe yemhando yemahara nguva yekuedzwa. Ini ndinokurudzira kushandisa ino nguva kunyatso kuchera mukati memutevedzeri wako wevatengi rutsigiro - ruzivo rwaro ruzivo uye kunyanya rutsigiro rwevashandi pane yese chiteshi. Izvi zvinokuudza iyo chaiyo nyaya.
Huwandu hwe traffic hwunowana hune huwandu hukuru pakubata iyo kwaunoda.
Kune saiti inowana vashanyi mazana matatu emwedzi wega wega, zvakaringana chero zviyero zvekugashira package ichave yakanaka zvakakwana. Chero bedzi webhu yako saiti ine rubatsiro rwakasimba rwevatengi, iwe wakanaka kuenda.
Sezvo iwe paunenge uchikura, ese ese madiki madiki madiki anotanga kuita zvakawanda wakawanda.
Iyo PHP pane yako server inovandudzwa nguva dzose here? Iwe unayo CDN yezvako zvemukati here? Ko saiti yako iri kudzoserwa kumashure zuva nezuva uye unogona kuidzosera mukati memaminetsi gumi nemashanu kana chimwe chinhu chikatadza? Iwe une chitupa cheSSL? Inogona here sevha yako kubata hofori traffic mike panguva yekushambadzira kushambadzira?
Chero ini pandinenge ndiine saiti yakakura, ini ndinotsvaga iyo yeprimiyamu inogadzirisa iyo inotarisira zvese izvi kwandiri. Uye kana ndiri kuronga kuvaka saiti yakakura, ini ndinotarisa kune iyo inomiririra inogona kuyera nyore kusvika kumamiriyoni evashanyi pamwedzi. Ndiri kufara kubhadhara premium mutengo kuitira kuvimbisa zviri nyore kukwidziridzwa mune ramangwana.
Usatsemuke kana uri kuenda zvikuru.
Uye kana iwe ukaronga kugara pasi pevashanyi zviuru / mwedzi, tora yakaganhurirwa yakagovaniswa padhiji. Iko hakuna chikonzero chekunetseka nezve zvinhu zvepamberi.
Kunyange iwe usingade kubhadhara zvakanyanya kukambira, iwe haudi kumbopeta.
Dzivisa kusarudzira mushandi chete pamutengo.
Yakanyanya kukosha hurongwa hwekugamuchira webhu iri mumadhora gumi- madhora makumi maviri / mwedzi. Ehe, pane sarudzo dzinodhura. Dzimwe dzadzo ndidzo dzekusimudzira dzinoenda kunovandudzwa. Vamwe vari kuronga zvirongwa nerubatsiro runotyisa uye nguva yepamusoro.
Mutemo wangu kana iwo mutengo unonzwika zvakanaka kuti uve zvechokwadi, zvingangove zvakadaro.
Iniwo handinetseke nekudzingira mberi mari yekupasa kwakachengeteka mashoma madhora. Kune ese saiti yandakambobata, taishandisa muenzi wedu kwemakore kupera pasina kumbobvira tachinja kamwe pataive nemugamuchiri wataifara naye. Zvekukurudzira zvipo zvinouya nekukurumidza nekukurumidza.
Iko kugona kwe nyore uye nekukurumidza kutamisa nzvimbo iripo inokuchengetedza iwe vhiki yenguva.
Kunyangwe iyo yakakosha WordPress saiti inogona kunge iri kunetseka kwekutama. Kutanga iwe unofanirwa kumisikidza WordPress nyowani yekuisa pane yako nyowani itsva. Ipapo iwe unofanirwa kutumira database yezvinyorwa kubva kune yako yekare saiti uye kuendesa kune yako nyowani. Pakupedzisira iwe unofanirwa kugadzirisa zvakare zvese zviri muWordPress senge theme, plugins, uye marongero.
Ndihwo kurwadziwa chaiko ndosaka tichiisa pamwechete nhungamiro izere pamusoro pekutama kwe WordPress.
Izvo zvinokwanisika kuruka zvese izvi.
Mamwe mauto anokupa imwe-kubaya-kutama kutama kwevakakurumbira saiti vavaki seiyo WordPress.
Kana iwe uchichinja magadhi uye kubata kutama kwacho pachako, tsvaga iri nyore nzira yekutama. Iyi ndiyo nzira huru yekuita sarudzo yekupedzisira kana uchinge watetepa pasi kune mashoma ekupedzisira sarudzo.
Heano maitiro akajairika anoshanda:
Mushure mekusaina, iwe unowana kupinda.
Iyo yekupinda inotora iwe kuenda kuCPanel. Iyo cPanel ndeye app pane yako server inoita kuti iwe uigone kuitora kuburikidza neUI pasina kuda kuziva nzira yekuodha chero chinhu.
Iwe unogadzirisa sevha yako zvisinei nekuti iwe unoda.
Pane FTP sarudzo yekuisa mafaira pamanja kune server rako.
Kune zvakare sarudzo dzinokurumidza dzekuisa WordPress uye imwe saiti software kana iwe uchida.
Iwe unowana zvakakwana kuwana uye unogona kuita chero chaunoda. Iyo "sarudza chako chiitiko." Isa WordPress, Drupal, Magento, kana kodha saiti yako yese neruoko.
Mazhinji mawebhu anotambira anoshanda seizvi.
Kune mamwe makompawebhu akachengetedzwa. Aya mahedhi anogadzirisa nharaunda yekutambira uye anochengeta yakawanda yakawanda yayo kwauri.
WP Engine ndiyo yakanakisa muenzaniso, ivo vakachengetedzwa vanogamuchira WordPress. Panzvimbo pekuwana cPanel yekunaka iyo inoita kuti ndiite chero chinhu chandinoda, WP Injini inondipa login kune yavo tsika interface iyo yakavakirwa kubata maWebhu saiti zvakananga.
Kana webhu inomiririra yakagadzirirwa chete WordPress, zvinhu zvitatu zvakakosha zvinoitika. Chekutanga: Zvinokurumidza kupfuura zvakanak chero chero munhu angagovana neweji wekutambira anogona kurota. Zvese zvinhu zvinogona kurongedzwa kuti iite WordPress ibudirire, ingave iri kuvandudza webhusaiti caching kana tinkering nemirairo mutsara maturusi. Iyo inomiririra inongoda chete kuziva nzira yekutsigira nayo WordPress, sekupesana, taura, Joomla uye Node server uye imwe mhando yeakagadzirwa-yakagadzirwa saiti uye mberi uye mberi.
Chechipiri: Nzvimbo dzinowana akachengeteka uye dzakagadzikana. Iyo inochengetedzwa neWordPress host inokwanisa kuvaka system inofungidzira, kugara, uye inobata zvese zvekusagadzikana kweWordPress. Izvi zvinoreva vashoma kurwadzisa uye kushaya nguva yekuita.
Chekupedzisira, uye pamwe chakanyanya kukosha kumabhizinesi madiki: Admin uye kugadzirisa kwewebsite kuwana zvakanyanya nyore. Uye iyo sevhisheni yakakosha nekuti yakagarwa neWordPress hosting inodhura zvakanyanya kupfuura yakagovana webhu kutambira.
Ndichiri kuregera kudzikama kubva pakusava neyekutanga dura rewebhu senge mamwe mauto, munhu anochengetwa anotarisira mabasa mazhinji anoenderera mberi andingowanzoita angu.
Kana iwe uine diki bhizinesi saiti, zvakajairika host yakanaka. Kana iwe uri kuvaka saiti yakakura, iyo inomiririrwa inochengetedza iwe toni yenguva mukufamba kwenguva uye yakakodzera kune mumwe mutengo.
Kugoverwa, Virtual Pachedu Servers, iCloud, uye yakatsaurirwa Hosting
Ngatitangei nerondedzero pane mhando dzekutambira zvaunogona kutenga.
Yakagoverwa kugovera zvinoreva kuti iwe unogovana nzvimbo neboka remamwe masosi pane imwe sevha. Mukana ndewekuti zvakachipa zvakanyanya. Iyo iripo pasi ndeyekuti mamwe masayiti anogona kukanganisa kushanda kwewebsite yako. Kana mumwe munhu akawana imwe hombe yemotokari, inogona kukanganisa munhu wese pane iyo sevha pamberi pewebhu inomhanyisa traffic yavo.
Virtual yakavanzika maseva (VPS) zvakare ine akawanda masosi pane imwe sevha Asi Asi aya masayiti akatsaurira nzvimbo iyo inotarisirwa nesoftware. Iwe unowana zvakawanda zvezvikwanisiro zvekuve ne server yakazvitsaurira (iwe unayo IP kero, kushoma kusimba mukukwana nguva, nezvimwe) usingade sevha yakazara yako wega. Asi kuita kwacho hakuna kunaka sekunge uine yako server kwauri.
Cloud Hosting yakafanana neVPS asi panzvimbo yekuve nenzvimbo pane imwechete server, iwe unowana nzvimbo pane akawanda maseva. Kufanana neVPS, inogarisana neye traffic traffic spikes kubva kune mamwe masosi. Kana saiti pane imwe sevha yako ichitora iyo sevha pasi, wako anokumbira anongoendesa saiti yako kune imwe seva. Ndicho chikonzero ivo vanoidana kuti "gore" kutambira. Iyo zvakare yakanyanyisa kukuvadza kune yako saiti. Kuwedzera zvimwe zviwanikwa kune yako saiti mhepo ine mhepo sezvo muramu wako anongoda kuwedzera iyo yakazara sevha zviwanikwa zvaunogona kudya chero nguva yakapihwa. Nekuda kwezvakanaka izvi, zvinoita kuti zvive zvakanyanya kudhura.
Dedicated hosting inokupa sevha chete yako. Hapana mumwe munhu anowana nzvimbo pane iro server. Iwe uchave zvakare mukutonga kwakakwana uye unogona kugadzirisa iyo server zvisinei iwe yaunoda.
Ndeipi yeidzi yaunofanira kuwana? Heano mimwe mitemo iri nyore yeminwe:
Nzvimbo diki dzinofanirwa kunge dziri pane dzakagovana zvekugovana. Chero zvipi zvinokanganisa kubva kune mamwe masayiti pane izvo saiti ichave iri diki. Iyi ndiyo sarudzo yakanakisa kune chero saiti inoita vashanyi zviuru zvishanu pamwedzi kana pasi.
Paunowana vanopfuura 50,00 vashanyi / mwedzi, famba wakananga kune gore rekutambira uye ipapo wakazvitsaurira kana iwe uchinyatsoida. Usatombo kunetseka nezve muchengeti akatsaurwa kusvikira apedza zviuru zvemadhora pamwedzi pane kutenderera kunonzwika sekutadza kutenderera mubhajeti rako regore.
Regedza Yemahara Webhu Inotambira
Kune angangoita munhu wese, kutambira zvemahara hazvina basa.
Webhu saiti haisi iyo kwaunofanirwa kuchengetedza mari. Kana iwe uchinetseka pamusoro pemutengo wekugamuchira, ndingati iwe unofanirwa kunetseka nezve kugadzira mari uye traffic pamberi pekuedza kuchengetedza mashoma emadhora ekucheka mutengo wekugamuchira.
Yemahara yakasununguka yakangonaka kune chimwe chinhu sechiitiko chimwe-pager kana chidiki chakanyanya, chakanyanya kuderera-traffic saiti. Kana iwe uri kuita chero che izvo zvinhu, iwe unofanirwa kusvetuka nzira yemahara yeakasununguka uye kusvetuka wakananga kune yakasununguka webhusaiti yekuvaka iyo inokuita kuti ubatanidze yako saiti kune yetsika dhara mahara, Ucraft or Google Sites. Ivo vaviri vari vakanyanya madiki mashoma anovaka, asi ivo vari nyore kusimuka nekumhanya kupfuura yemahara web host.
Izvo zviri kutaurwa, kune mamwe makuru emahara uye marapiro webhusaiti ekuronga kwezvezvisingabatsiri uye vadzidzisi. Kana ari iwe uye iwe uchida kuziva zvakawanda, tungamira kune zvangu yakanakisa yemahara webhu kuongororwa. Ini ndinoenda mune zvakawanda zvemashoko ipapo.
Iyo Yakasiyana Mhando dzeWebhu Webhu Sarudzo
Yakanyanya Kugoverwa Zvirongwa Zvekushandisa
Yakanakisisa cPanel Webhu Hukuru
Iyo Yakanakisa Yakazvitsaurira Dhivhosi Zvirongwa
Iyo Yakanyanya Reseller Kubata Zvirongwa
Wordpress.org vs WordPress.com: Chii Musiyano?
Iwo chaiwo akanakisa VPS ekutambira vanopa ve2022 (ine cPanel)